ढल्केवरमा सडक दुर्घटना परी दुईजना घाईते – Shirish News
ढल्केवरमा सडक दुर्घटना परी दुईजना घाईते
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको ढल्केवरमा आज भएको सडक दुर्घटना परी दुईजना घाईते भएका छन् ।
काकडभिट्टाबाट काठमाडौंतर्फ तिब्र गतिमा आइरहेको बा.३ ख. ७८७६ नम्बरको हाइस गाडीले मिनपा–६ ढल्केवरको पूर्वचौक स्थित राजमार्गमा आज बिहान अन्दाजी ११ बजेतिर ज.११ प. नम्बरको माटरसाइकलमा ठक्कर दिँदा मोटरसाइकलमा सवार दुईजना सख्त घाइते भएका छन् ।
घाइते हुनेहरुमा मिनपा–६ ढल्केवर बस्ने मनोज भट्टराईको छोरा अन्दाजी २० बर्षीय मन्दिप भट्टराई र सोही ठाउँ बस्ने जुगल साहको छोरा अन्दाजी २१ बर्षीय सरोजकुमार साह रहेका छन् ।
घाइते मध्ये मन्दिपको टाउको र खुट्टामा गम्भीर चोट लागेको छ । र, नीजलाई स्थानीय स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा प्राथमिक उपचार पश्चात थप उपचारको लागि काठमाडैं लगिएको छ भने सरोजलाई सामान्य चोटपटक लागेकोले ढल्केवरमै उपचार भइरहेको इप्रका ढल्केवर जनाएको छ ।
हाल हाइस र मोटरसाइकललाई प्रहरीले आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको इप्रकाले बताएको छ ।